Isifinyezo se-Japan Host Insurance | Airbnb®
I-Japan Host Insurance
Iyini i-Japan Host Insurance?
I-Japan Host Insurance ikhokhela izimo lapho Umbungazi* eba nomonakalo noma ezinye izindleko ezihlobene nokulimala kwabanye abantu noma umonakalo wendlu yabanye abantu ngenxa yokuhlala nezivakashi ekhaya lakho, futhi ezimweni lapho Umbungazi eba nomonakalo endlini yakhe ngenxa yokuhlala Kwesivakashi*. Ezimweni lapho indlu Yombungazi yonakaliswe ngenxa yokuhlala Kwesivakashi, ukukhokhelwa komshwalense kuzosebenza lapho impikiswano phakathi Kombungazi Nesivakashi ingakwazi ukuxazululwa phakabi kwabo bobabili bese-ke Umbungazi exhumana ne-Airbnb.
I-Japan Host Insurance uhlelo lomshwalense oluthathwe ngaphansi kwe-Sompo Japan Insurance Inc.
Akudingekile ukuthi ababungazi bakhokhe amaphrimiyamu womshwalense ukuze bazuze ohlelweni lwe-Japan Host Insurance.
Sicela ubheke imininingwane elandelayo mayelana nekhava yomshwalense we-Japan Host Insurance.
Lesi sikhathi somshwalense wohlelo lwamanje lomshwalense sisuka kumhla ka-31 Julayi 2021 kuya kumhla ka-31 Julayi 2022.
Izinga nezimo zokufaka isicelo se-Japan Host Insurance
Ukukhokhelwa kwe-Japan Host Insurance kuzoba okokonakaliswa kwendlu Yombungazi nomonakalo noma ezinye ezindleko Umbungazi abhakene nazo ngokuhlobene nokulimala nokonakaliswa kwabanye abantu noma indlu yabo phakathi nesikhathi sokuhlala nabanye abantu Endlini
Indawo Yokuhlala Ekhaviwe
I-Japan Host Insurance ikhava Indlu* Umbungazi angumnikazi wayo, akayisebenzisayo noma akayiqondisayo ukuqhuba Ibhizinisi Lokuhlala Nabanye Abantu.
(*) Indlu isho izikhungo ezigunyaziwe ngaphansi kwe-Hotel Business Act, eziqinisekiswe ngaphansi kwe-National Strategic Special Zones Act, ezaziswe ngaphansi kwe-Private Lodging Business Act, noma ezinye izikhungo lapho kuqhutshwa khona ibhizinisi lokuhlala elicishe lifane; kuphela nje uma kufezwa izimfuneko ezilandelayo:
Izikhungo ziphethwe noma ziqashwe nguMbungazi;
Izikhungo zifakwe ewebhusayithini ye-Airbnb; futhi
Izikhungo zibhukhwa futhi zisetshenziswa ngumuntu onikeze imvume yemibandela yesevisi ye-Airbnb futhi usebenzise iwebhusayithi ye-Airbnb. Izikhungo zokuhlala zihlanganisa omahambanendlwane, amabhasi, izimoto zokukhempa, izindlu ezakhiwe esihlahleni, nezinye izikhungo ezipakwayo futhi ezisetshenziswa njengezikhungo zendawo yokuhlala. Izikebhe nezikebhe zamanzi nazo ziyahlanganiswa uma zisetshenziswa njengezindawo zokuhlala.
Ababungazi basho abantu abazibandakanya (*) Ebhizinisini Lokuhlala Nabanye Abantu.
Izivakashi zisho abasebenzisi (*) Bebhizinisi Lokuhlala Nabanye Abantu, okuhlanganisa labo abamenywe ngumsebenzisi kanye nalabo abasebenzisa ndawonye Ibhizinisi Lokuhlala Nabanye Abantu.
(*) Ibhizinisi Lokuhlala Nabanye Abantu lisho ibhizinisi lehhotela elichazwe Kumthetho Wamabhizinisi Wamahhotela (uMthetho No. 138 ka- 1948), ibhizinisi elishiwo kuMthetho Wezindawo Ezikhethekile Zesu Likazwelonke (uMthetho No. 107 ka-2013), noma ibhizinisi lezindawo zokuhlala elichazwe eMthethweni Webhizinisi Lezindawo Zokuhlala (uMthetho No. 65 ka-2017), noma elinye ibhizinisi lendawo yokuhlala elifanayo, kanye nanoma yimiphi imisebenzi eyenziwa ngaphakathi noma ngaphandle kwaleyo Ndlu ehambisana namasevisi angenhla, eqhutshwa kusetshenziswa Inkundla Eyidijithali ye-Airbnb.
Ukukhokhelwa komshwalense (imibandela emayelana nomonakalo)
Umkhawulo ophezulu osebenzayo phakathi nesikhwathi somshwalense ngu-¥100,000,000 JPY ingozi ngayinye.
Izinto eziyinhloko ezingakhokhelwa i-Japan Host Insurance (izigatshana eziphathelene nesinxephezelo sezingozi zomonakalo wendlu)
Izinto ezingafakiwe Endlini:
Uhlobo lwemali, imali, insimbi eyigugu yohlobo lwe-bullion, amanothi noma izibambiso.
Umhlaba, amanzi nanoma iyiphi enye into esemhlabeni noma kumhlaba; kodwa-ke, lokhu angeke kusebenze ekuthuthukisweni komhlaba okubandakanya ingadi yezwe, imigwaqo kanye nezindawo ezigandaywe ngamatshe (kodwa kuyosebenza kunoma yimuphi umhlaba owengeziwe noma umhlaba ongaphansi kwaleyo ndlu) noma emanzini aqukethwe kunoma yiliphi ithange elivalekile, noma iyiphi isistimu yamapayipi nanoma yiziphi ezinye izisetshenziswa zemishini.
Izilwane, kuhlanganise, kodwa akupheleli, emfuyweni nezilwane ezifuywayo.
Izingodo ezimile nezitshalo.
Imikhumbi yamanzi, izindiza, imikhumbi-mkhathi namasathalayithi; Nokho, lokhu angeke kusebenze kunoma iyiphi imikhumbi yamanzi engasebenzi futhi esetshenziswa njengeNdlu.
Izimoto; kodwa-ke, lokhu angeke kuhlanganise noma iyiphi imoto engasebenzi futhi esetshenziswa njengeNdlu.
Izimayini ezingaphansi komhlaba noma imigodi yezimayini nanoma iyiphi indlu engaphakathi kwalezo zimayini noma imigodi.
Amadamu, izindonga zokubiyela nezindonga ezinkulu.
Imigqa yokudlulisa nokusabalalisa engaphezu kwamamitha angu-305 ukusuka Endlini.
Izimo eziyinhloko lapho imali yomshwalense ingakhokhelwa:
Impi, ukusetshenziswa kwamandla ezweni langaphandle, ukuvukela umbuso, ukuqhwagwa kukahulumeni, impi yombango, ukuvukela umbuso kuhlonyiwe, noma ezinye izigameko ezifanayo noma izibhelu.
Ukulimala okudalwe imisebe, ukuqhuma noma omunye umonakalo ngenxa yokusabela kwenyukliya noma ukubola kwenucleus ye-athomu yezinto eziphehla uphethiloli zenuzi noma umthombo wezinto eziwumthombo we-nuclear, i-radioactive element, i-radioisotope noma impahla engcoliswe yilezo zinto, noma ingozi edalwe yilokho, ngaphandle kwe-nuclear ukusabela noma ukubola kwenyukliya kwe-atomic nuclei kwama-radioisotope ekusetshenzisweni kwezokwelapha, kwesayensi, noma kwezimboni.
Ukusetshenziswa okunonya kwangempela noma okusongelayo kwezinto ezinobuthi zebhayoloji noma zamakhemikhali.
Umonakalo Wendlu owenzeka phakathi nenkathi lapho Indlu ingasetshenziswa Izivakashi.
Ukulimala okudalwe ukungaziphathi kahle ngamabomu noma ubudedengu obukhulu Kwababungazi.
Izimo eziyinhloko lapho imali yomshwalense ingakhokhwa (izigatshana eziphathelene nesinxephezelo somonakalo)
Impi, ukusetshenziswa kwamandla ezweni langaphandle, ukuvukela umbuso, ukuqhwagwa kukahulumeni, impi yombango, ukuvukela umbuso kuhlonyiwe, noma ezinye izigameko ezifanayo noma udlame.
Ukulimala okudalwe imisebe, ukuqhuma noma omunye umonakalo ngenxa yokusabela kwenyukliya noma ukubola kwe-atomic nucleus kwezinto eziphehla uphethiloli zenuzi noma umthombo wezinto eziwumthombo we-nuclear, i-radioactive element, i-radioisotope noma impahla engcoliswe yilezo zinto, noma ingozi edalwe yilokho, ngaphandle kwe-nuclear ukusabela noma ukubola kwe-atomic nuclei kwama-radioisotope ekusetshenzisweni kwezokwelapha, kwesayensi, noma kwezimboni.
Ukulimala okudalwe ukungaziphathi kahle kwamabomu Kwababungazi.
Umonakalo ezihlotsheni ezihlala Nababungazi.
Umonakalo ovela ngenxa yokukhubazeka ngokomzimba okutholwe izisebenzi Zababungazi ngenkathi zisebenzela Ababungazi.
Ezimweni lapho kunesivumelwano esikhethekile esiphathelene nesinxephezelo somonakalo phakathi koMbungazi nomunye umuntu, umonakalo unqunywa yileso sivumelwano.
Umonakalo obangelwa amanzi angcolile noma ukukhishwa kwegesi.
Umonakalo ovela emsebenzini wobungcweti owenziwe abammeli, abammeli bakwamanye amazwe ababhalisiwe, ababhali bamabhuku abaqinisekisiwe, ababalisi bentela, abaklami bezakhiwo, abaklami, abaphenyi bomhlaba nezindlu, abadwebi bomthetho, abadwebi bomthetho, odokotela bezilwane, noma abanye abantu abafana nalokhu.
Umonakalo vela ekuphatheni, ekusetshenzisweni, noma ekuphathweni kwanoma iyiphi indiza, izimoto, noma umkhumbi noma imoto engaphandle kweNdlu, ngaphandle kwanoma yimuphi umonakalo odalwe ukusetshenziswa noma ukuphathwa kwemoto noma umkhumbi noma imoto ngaphandle kwendawo ngenkathi usebenzisa leyo moto noma umkhumbi noma imoto ngaphandle kwesikhungo njengeNdlu.
Umonakalo ovela emsebenzini wokwakha wesakhiwo esiqashisiwe, njengokulungisa, ukunwetshwa noma ukubhidlizwa, ngaphandle kwalapho Umbungazi azibandakanye khona emsebenzini wakhe.
Uma Umbungazi eqaphela ukulimala noma ukonakaliswa kwendlu Yesivakashi noma ilungu langaphandle, Umbungazi kufanele azise i-Airbnb ngokushesha ngangokunokwenzeka ngoba umshwalense ungase usebenze. Ngokufanayo, uma Umbungazi eqaphela umonakalo wendlu ephethwe noma Umbungazi angumnikazi wayo, Umbungazi kufanele azise i-Airbnb uma yena Nesivakashi sakhe behluleka ukufinyelela isivumelwano sesigameko phakathi namahora angu-72 wokuxhumana Nesivakashi ngoba umshwalense ungase usebenze.
Isicelo sokuthunyelwa kwenqubomgomo yomshwalense
Lokhu kubuka konke kwe-Japan Host Insurance akuhlanganisi yonke imigomo yenqubomgomo yomshwalense. Ukuze ucele ikhophi yenqubomgomo yomshwalense, sicela uthinte i-Marsh Japan, Inc. futhi ufake imininingwane ye-akhawunti yakho ye-Airbnb.
Inkampani ezibophezele ukukhokha umshwalense
I-Sompo Japan Insurance Inc.